Okuhlanganisiwe: Ipulatifomu Yokusebenza Komphakathi
NgoMsombuluko, Disemba 9, 2013 NgoMsombuluko, Disemba 9, 2013 Douglas Karr
Kuhlangene inikeza ubuchwepheshe bokumaketha amafu nezinhlelo zokusebenza ezenza inhlangano yakho ukuthi ilawule yonke impilo, yokuletha i-ROI ecacile nenenombolo. Ipulatifomu ye-Unified inikeza uhlelo oluhlanganisiwe lwerekhodi lemikhiqizo, ama-ejensi nabathengisi.
Izinzuzo Ipulatifomu Yokusebenza Komphakathi Ehlanganisiwe
Ungumnikazi futhi ulawule idatha yakho yokumaketha - I-Social Operating Platform ixhuma wonke ama-ejensi, abathengisi nemikhiqizo osebenza nayo ohlelweni lokumaketha lwamafu olulodwa, ikunikeze ukubuka okuphelele kwayo yonke inhlangano yakho yezentengiso. Nika inkampani yakho amandla okuhamba ngokushesha futhi wenze izinguquko - ungashintsha ama-ejensi, abathengisi noma amaqembu angaphakathi ngaphandle kokulahlekelwa yimininingwane yomlando.
Yenza imikhankaso yomphakathi eyinkimbinkimbi - Finyelela abathengi ngesikhathi esifanele, ngomyalezo ofanele, kuwo wonke amanethiwekhi omphakathi asepulatifomu eyodwa. I-Social Operating Platform inika amandla abaphathi bomphakathi, abahleli bezindaba kanye nama-ejensi ezobuciko ukuthi basebenzele umgomo ofanayo - ukwenza izilaleli zakho zisebenze.
Thuthukisa imidiya ekhokhelwayo, ephethwe futhi etholakele - Yenza lonke idola olichitha kwimidiya liqhubekele phambili - bona ngale kokuchofozwa nokuvelayo bese uqala ukulungiselela umthelela omkhulu ngokuqonda ukuthi imidiya yakho ekhokhelwayo ilakha kanjani inani lemidiya elengeziwe lapho abantu behlanganyela nokuqukethwe kwakho. I-Social Operating Platform ukuphela kwesixazululo esihlanganisa imidiya ekhokhelwayo, ephethwe nabatholile.
Humusha idatha enkulu ibe yi-ROI - Yenza lula ukubikwa kwakho ngokunikeza izenzo zomphakathi (ukuthandwa, ukuphawula, amasheya, ama-tweets, njll.) Inani lazo ledola, likunike amandla okuqhathanisa nokwandisa ukubuyiselwa okuphezulu ekutshalweni kwemali. Nika amandla wonke umuntu oseqenjini lakho ukukala ukusebenza ngokususelwe ku-ROI, esikhundleni sokugxila kumamethrikhi athambile noma angaqondakali njengokubandakanya noma ukufinyelela.
Yenza izinqumo eziqhutshwa yidatha - Ipulatifomu Yokusebenza Komphakathi ijwayele futhi ilinganise idatha yakho yokumaketha ukuletha izimpendulo zemibuzo efana nokuthi iyiphi ipulatifomu ekhiqize i-ROI enkulu kulo mkhankaso? Yimuphi umthengisi noma i-PMD osebenze kahle kakhulu ngesikhathi esinikeziwe? Singayisebenzisa kanjani imali ekukhangiseni komphakathi ngempumelelo enkulu?
Umjikelezo Wokuphila Komphakathi Ohlanganisiwe
Tags: imidiya etholakeleimidiya ephethweimidiya ekhokhelwayoimikhankaso yomphakathiuhlelo lokusebenza komphakathiokuhlangeneubumbano lomphakathi
Thengisa, Insizakalo neMakethe ngeSalesforce1
I-SEO iqhathaniswa ne-SEO entsha